Bangkok Attraction Tickets Discount
Bangkok Attraction Tickets Discount အသေးစိတ်
ကဲ…. ဘန်ကောက်ကို ကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့သွားဖို့ စီစဉ်နေကြတဲ့ သူတွေအတွက် သွားရောက် လည်ပတ်ကြည့်ရူဖို့အတွက် Attractions Tickets တွေကိုဝယ်ယူဖို့ အတွေးများဝင်နေပြီဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions ကိုသတိရလိုက်ပါ…
B&F Weekly Promotions မှာဆိုရင်တော့ ဘန်ကောက်ကို ရောက်ရှိပြီး မဖြစ်မနေ သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်တဲ့ Bangkok Dream World Tickets နဲ့ Sea life (ocean world) attraction Tickets များကို မူရင်းဈေးနူန်း 900THB ကို B&F Weekly Promotions နဲ့ဆိုရင်တော့ 500THB ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ဘန်ကောက်ကိုရောက်ပြီးမှာ ကြိုတင်မဝယ်လို့ Tickets Counter မှာ ဈေးအကြီးပေးဝင်ရတဲ့ ဝင်ကြေးလည်းမပေးရအောင် …
Credit Card နဲ့ဝယ်လို့ Transactions Fee တွေလည်း ပိုမကုန်ရအောင်အတွက် B&F Weekly Promotions မှာ ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီနော်…
ဒီလိုအချိန်ကုန်လည်းသက်သာမယ်….400THB ကြီးများတောင် ပရိုမိုးရှင်းရအုန်းမယ်ဆိုတော့ ဘာတွေးနေအုန်းမှာလဲ?
ဝယ်ယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ B&F Club Card ကအရှေ့မျက်နှာက Card No နဲ့ အနောက်က Security Code ကို Green Myanmar Travel and Tours ကိုပေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေ ၊ ဖုန်းနံပါတ် 099 69910106 ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ ပရိုမိုကုဒ် “ GMTTWP” ကိုပြောပြ၍ဖြစ်စေ ပရိုမိုးရှင်းးကို ရယူနိုင်ပါတယ်…
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 099 69910106 ကိုရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
Promotions Period - 19.Sep.2019 - 19.Nov.2019